ईकोसिस्टम का विशेषताहरु र प्रकारहरु हरियो नवीकरणीय
ईकोसिस्टमहरूका विशेषताहरू र प्रकारहरू
जर्मन पोर्टिलो | | पारिस्थितिकी, वातावरण
पक्कै पनि तपाईंले सुन्नुभएको छ इकोसिस्टम। यो पर्यावरण अनुकूल वा पारिस्थितिकी / पारिस्थितिकविज्ञानी देखिन्छ, तर यो छैन। एक ईकोसिस्टम एक एकीकृत प्राकृतिक वातावरण हो जुन वातावरणको अंश हो र दुवै जीवित र अक्रिय प्राणीहरू मिलेर बनेको हुन्छ। प्रत्येक प्रकारको इकोसिस्टमसँग बाँकी भन्दा फरक र फरक सुविधाहरू हुन्छन् जसले यसलाई विशेष ईमानदारी दिन्छ। सबै इकोसिस्टमहरू सक्रिय र "स्वस्थ" रहन्छन् जबसम्म इकोलोजिकल सन्तुलन कायम हुँदैन।
यी अवधारणाहरु तपाइँलाई चीनियाँ जस्तो लाग्न सक्छ। जे होस्, यदि तपाइँ पोष्ट पढ्न जारी राख्नुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई यी सबैको बारेमा सजिलो, सरल र मनोरन्जनकारी तरिकामा सूचित गर्नेछौं। के तपाईं पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ अवस्थित प्रकारहरूको बारेमा बढी सिक्न चाहनुहुन्छ?
1 इकोसिस्टम परिभाषा
2 इकोसिस्टम दृश्यता
3 इकोसिस्टमका प्रकारहरू
3.1 प्राकृतिक ईकोसिस्टमहरू
3.2 कृत्रिम इकोसिस्टमहरू
3.4 ताजा पानी
सबै कम्पोनेन्टहरू जुन इकोसिस्टमको अंश हुन् एक उत्तम सन्तुलन हुन्छ जुन परिणाममा सद्भाव हुन्छ। दुबै जीवित र अक्रिय प्राणीहरूको कार्यक्षमता हुन्छ र प्राकृतिक वातावरणमा "सेवा" गर्ने कुरा केहि पनि छैन। हामी सोच्न सक्छौं कि कष्टदायक कीराहरूको केही प्रजातिहरू "बेकार" हुन्। यद्यपि प्रत्येक अवस्थित प्रजातिहरू वातावरणको जीवनशैली र कार्यको समर्थन गर्दछन्।
थप रूपमा, त्यो मात्र होईन, तर यो जीवित र निर्जीव प्राणीहरूको सन्तुलन हो जसले पृथ्वीलाई पृथ्वी बनाउँदछ जुन हामी यसलाई आज जान्दछौं। विज्ञान पर्यावरण हो कि सबै पक्षहरु को अध्ययन को लागी जिम्मेवार छ, चाहे प्राकृतिक वा मानवीय। मानव अधिकांश क्षेत्र उपनिवेश भएकोले ईकोसिस्टमको अध्ययनमा परिचय दिन यो आधारभूत चर हो।
हामीले माथि उल्लेख गरिसकेका छौं, त्यहाँ ईकोसिस्टमका बिभिन्न प्रकारहरू छन् जुन दुबै भिन्न हुन्छन् यसको उत्पत्ति सतह र प्रजातिहरूको प्रकारहरूमा जस्तै यसमा बन्दरगाह छ। प्रत्येक फरक पक्ष यो विशेष र अद्वितीय बनाउँछ। हामीले स्थलीय, समुद्री, भूमिगत इकोसिस्टम र विभिन्न प्रकारका अनन्तता फेला पार्न सक्छौं।
प्रत्येक प्रकारको इकोसिस्टममा, केही प्रजातिहरू प्रबल हुन्छन् जसले अधिक विकासवादी सफलता प्राप्त गर्दछन् र त्यसकारण उनीहरूको बाँच्ने तरिका र क्षेत्र दुवैमा विस्तार गर्न उत्तम नियन्त्रण गर्दछ।
जसरी पृथ्वीको संरचनाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, प्राय जसो इकोसिस्टमहरू जलचर हुन्छन् किनभने ग्रह water/। भाग पानी मिलेर बनेको हुन्छ। अझै, त्यहाँ अन्य प्रजातिहरू सहित स्थलीय इकोसिस्टमका अन्य धेरै प्रकारहरू छन्। यस प्रकारका धेरै जसो इकोसिस्टमहरू मानिसहरूलाई ज्ञात छन्, किनकि तिनीहरू शहरी केन्द्रहरूबाट धेरै टाढा छैनन्।
मानवले सबै सम्भव क्षेत्रहरू औपनिवेशिक रूपमा खोज्ने कोसिस गरेको छ र यसैले, यसले असंख्य प्राकृतिक वातावरण बिग्रेको छ। सायद कुनै पनि कुमारी क्षेत्र सम्पूर्ण ग्रहमा छोडियो होला। हामीले एउटा छाप बनाएका छौं।
एक इकोसिस्टममा हामीले दुईवटा आधारभूत कारकहरू भेट्टायौं जुन हामीले विचारमा लिनुपर्दछ। पहिलो हो अजैविक कारक। तिनीहरूको नामले सts्केत गर्दछ, तिनीहरू ती ईकोसिस्टमहरू हुन् जसले जीवन गर्दैन र जसले सबै सम्बन्धहरूलाई पारिस्थितिक तंत्रमा पूर्ण गर्दछ। अजैविक कारकको रूपमा हामीले भूमिको भूगोल र स्थलाकृति, माटोको प्रकार, पानी र मौसम पत्ता लगाउन सक्छौं।
अर्कोतर्फ, हामी फेला पार्दछौं बायोटिक कारक। यी ती तत्वहरू हुन् जसमा जीवनहरू बिरूवाहरू, जनावरहरू, ब्याक्टेरियाहरू, फgi्गी, भाइरस र प्रोटोजोआका विभिन्न प्रजातिहरू हुन्। यी सबै कारकहरू वातावरणको आवश्यकता अनुसार के छ र कुन कुरा उत्तम छ ताकि जीवन लाखौं बर्षमा बढ्न सक्दछ। यसलाई नै पारिस्थितिक सन्तुलन भनिन्छ। इकोसिस्टमको प्रत्येक कम्पोनेन्ट, एबियोटिक वा बायोटिकको बीचमा रहेको अन्तरसम्बन्ध सन्तुलित छ ताकि सबै कुरा मिल्दोजुल्दो छ (हेर्नुहोस्) बायोम भनेको के हो?)
यदि एक पारिस्थितिक तंत्रको पारिस्थितिक सन्तुलन बिग्रिएको छ भने, यसले यसको विशेषताहरू हराउनेछ र अनिवार्य रूपमा गिरावट आउँदछ। उदाहरण को लागी, प्रदूषण को माध्यम बाट।
अब हामी विभिन्न प्रकारका इकोसिस्टमहरू वर्णन गर्न गइरहेका छौं।
ती हुन् जुन प्रकृति हजारौं बर्षमा विकसित भयो। तिनीहरूसँग जग्गाको ठूलो क्षेत्र छ ती दुबै स्थलीय र जलीय छन्। यी इकोसिस्टमहरूमा हामी मानिसको हातलाई ध्यानमा राख्दैनौं, त्यसैले हामी तिनीहरूको कृत्रिम रूपान्तरणहरूलाई अन्य प्रकारका इकोसिस्टमहरूमा छोड्दछौं।
यी ती हुन् जुन मानव क्रियाकलापबाट सिर्जना गरिएका हुन्छन्। यी ती क्षेत्रहरू हुन् जुन स्वभावले नै सिर्जना गरेको सतह छैन र त्यो ठूलो हदसम्म, खाना चेनमा फाइदा लिनको लागि सिर्जना गरिएको हो। मानव गतिविधिले प्राकृतिक ईकोसिस्टमलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ र, त्यसकारण, पुनर्स्थापनाको लागि प्रयास गरियो ताकि नाम पर्यावरणीय सन्तुलन यसलाई अपरिहार्य हुनु अघि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ।
ती हुन् जसमा बायोसेनोसिस गठन हुन्छ र माटो र सबसोइलमा मात्र विकसित हुन्छ। यी वातावरणका सबै सुविधाहरूमा आर्द्रता, उचाई, तापमान र अक्षांश जस्ता प्रमुख र निर्भर कारकहरू छन्।
हामी जles्गलहरू, सुक्खा, उप-उष्णकटिबंधीय र बोरियल जंगलहरू भेट्टाउँछौं। हामीसँग मरुभूमि वातावरण पनि छ।
यहाँ सबै क्षेत्रहरू छन् जहाँ ताल र नदीहरू छन्। हामी खाली ठाउँहरू पनि लिन सक्छौं जहाँ हामीसँग लोटिक्स र लेन्टिक छ। पहिले ती स्ट्रिमहरू वा स्प्रि .हरू हुन् जसमा माइक्रो वासस्थान गठन भइरहेको युनिडेरेक्शनल वर्तमानलाई धन्यवाद।
अर्कोतर्फ, लेन्टिकहरू ताजा पानीका क्षेत्रहरू हुन् जहाँ कुनै धारहरू छैनन्। तिनीहरूलाई स्थिर पानी पनि भन्न सकिन्छ।
समुद्री इकोसिस्टमहरू पृथ्वीमा सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा पाइन्छन्। यो कारणले हो यस ग्रहको सबै जीवन समुद्रमा विकास गर्न सुरु भयो। यसलाई निर्माण गर्ने सबै कम्पोनेन्टहरू बिचको ठूलो सम्बन्धका कारण यसलाई ईकोसिस्टमका सब भन्दा स्थिर प्रकारहरूमध्ये एक मानिन्छ। थप रूपमा, यो कब्जा गरेको ठाउँ मानव हातले क्षति पुर्‍याउन अविश्वसनीय रूपमा ठूलो छ।
तैपनि, विश्वभरि महासागरहरू र समुद्रहरूले मानव गम्भीर कार्यहरू भोगिरहेका छन् जस्तै नकारात्मक प्रभावहरू जस्तै पानी प्रदूषण, विषाक्त निर्वहन, कोरल रीफ्सको ब्लीचिंग, आदि।
मरुभूमिमा वर्षा अत्यन्तै कम हुन्छ। त्यहाँ कतै पानी छ, वनस्पति र जीव जटिल धेरै छ। यी असुरक्षित स्थानहरूमा अवस्थित जीवित प्राणीहरू अनुकूलन र धेरै प्रतिकूल वातावरणीय अवस्थाको सामना गर्न बाच्न को लागि एक ठूलो क्षमता छ। जनावरहरूको प्रजाति बीचको सम्बन्ध टुक्रिने छैन। जे होस्, यदि खाद्य श्रृंखला बनाउने कुनै पनि प्रजातिको बीचमा केहि भयो भने, हामी प्रजातिहरूको सन्तुलन भर गम्भीर समस्या हुनेछ।
यदि एक प्रजातिले यसको जनसंख्या कम गर्‍यो भने हामी अरूमा विपत्तिहरू निम्त्याउनेछौं। डेजर्टहरू धेरै कमजोर वातावरण र उनीहरूको एकदम शुष्क वातावरण र दिन र रातको बीचको तापक्रममा ठूलो भिन्नताका कारण धेरै कमजोर पारिस्थितिक तंत्रहरू छन्।
यी इकोसिस्टमहरूमा हामी उच्च राहत पाउँछौं र धेरै जसो अवस्थामा धेरै ठाडो हुन्छन्। यी उचाईहरूमा, बोटबिरुवा र जनावरहरू राम्रोसँग विकास गर्न सक्दैनन्। जैवविविधता घट्छ जब हामी उचाईमा बढ्छौं। पहाडको फेदमा असंख्य प्रजातिहरू छन् र तिनीहरूले वरपरको वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। यद्यपि जब हामी उचाईमा वृद्धि गर्दछौं, प्रजातिहरू घट्दैछन्। हामी ब्वाँसो, चामोइस र शिकारका चराहरू जस्तै चीलहरू र गिद्धहरू जस्ता पशुहरू भेट्छौं।
यीसँग उच्च रूखको घनत्व र वनस्पति र जीव जन्तुहरूको मात्रा छ। केहि ईकोसिस्टमहरू जस्तै ज such्गल, शीतोष्ण वन, ताइगा र सुख्खा जंगल छन्। सामान्यतया, आर्द्रता, वर्षा र रूखको घनत्वले जीव जन्तुको विकासको पक्ष लिन्छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं ईकोसिस्टम र यसका सबै सुविधाहरूको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » पारिस्थितिकी » ईकोसिस्टमहरूका विशेषताहरू र प्रकारहरू
ऊर्जा भनेको के हो?
भवनहरूमा ऊर्जा दक्षता